Macallin Ingiriis ah oo ka sheekeeyay tababare Talyaani ah oo uu u safray si uu wax uga soo barto + Sawirro – Gool FM
Macallin Ingiriis ah oo ka sheekeeyay tababare Talyaani ah oo uu u safray si uu wax uga soo barto + Sawirro
Raage August 6, 2017
(Bournemouth) 06 Agoosto 2017 – Macallinka Bournemouth ee Eddie Howe ayaa caawa fiidkii la dheelaya kooxda SSC Napoli wuxuuna ka hadlay inuu wax ka baran jirey macallin Maurizio Sarri isagoo leh. “Wax badan baan ka bartay safarradaasi.”
Macallinkan ayaa Talyaaniga u safri jirey berigii uu Sarri wadey kooxda yar ee Empoli, balse wuxuu isla markaaba ahaa macallin muujinayay inuu yahay nin kacaaminaya kubadda Talyaaniga iyadoo lagu naanayso Arrigo Sacchi-ga cusub, isagoo xitaa drone u adeegsada tababarka kooxdiisa.
“Waxay noqon doontaa ciyaar adag, weliba midda ugu adag kal-horaadka ilaa haatan, waa koox aan macallinkeeda xiriir wanaagsan la leeyahay,” ayuu Howe u sheegay Daily Echo.
“Sarri waa nin aad u deggan, aadna u fikira, shaqada dhanka taatikada uu ka qabtay waa mid loo wada jeedo. Wax badan baan ka bartay safarradii aan ku tegey Talyaaniga, sidaa darteed waa ii sharaf inaan mar kale arko.” ayuu Howe raaciyay.
“La yaab malaha inuu ku afloxo koox wayn oo Napoli oo kale ah, waayo waxaan ogaa shaqadii uu qabanayay isagoo Empoli jooga.” ayuu yiri Howe oo sheegay inuu weli wax ka barto Sarri.
Labada kooxood ayaa caawa fiidkii ku faltami doona Vitality Stadium aminta UK marka ay tahay 19.30 (18.30 GMT).
Arsenal oo ku guulaysatay Community Shield kadib gool ku laad ay uga adkaatay Chelsea +SAWIRRO
Maxaa ka Qaldanaa habkii Rigoorooyinka loo tuuray kulankii Chelsea iyo Arsenal???